Lacagtee baa Faalso ah ? MAQAAL | AllPuntland.net
Sanadkii 1971 ayaa dalka Faransiiska iyo dalal badan oo kale oo doller badani Bangiyadooda yaalay ka dalbadeen Maraykanka in uu ugu bedalo Dahab madaama ay alaabadoodii ku iibiyeen. Maraykanka ayay u suurtageli weyday wakhtigaasi inuu dahabkaasi ku bedelo, isagoo isla markiiba ku dhawaaqay inuu ka guuray nidaamki (Systemkii) lagu heshiiyay 1945 ee Bretton Woods System , Waxaana uu cadeeyay inuu u guuray nidaamka Flexible Exchange Rate System (Heerka sarifka aan joogtada ahayn).
Nidaamkan ayaa ah in Bangiga dhexe ee dal kastaa daabacdo hadba baahida lacageed ee dalkaasi u qabo isla maraakana aan lagu salayn wax dahab ah. lacagta dalka qiimaheeduna waxay ku xidhan tahay hadba sida lacagta dalkaasi ay dalalka kale ugu baahdaan taasi oo ah in wax soo saarka dalka aad loo kordhiyo si badeecadaha la dhoofinayo u bataan isla markaana u yaraadaan baahida loo qabo badeecadaha iyo alaabooyinka kale ee debeda ay uga baahan yihiin. (Import and export) .
Nidaamkan heerka sarifka go’an ee lacagta (A fixed exchange rate ) ayaa ah mid dawlad kasta bangiga dhexe ee ay leedahay ku jaangooyo qiima go’an ee lacagta dalka, isagoo u qiyaasaya lacag kale sida dolerka ama qiyaaso kale sida dahab ama silver ,
Waana nidaam waxtar iyo waxyeelaba leh, waxaana inta badan loo isticmaala si loo ilaaliyo qiimaha lacagta oo saamigaasi ay wax ku jarayso ee la gooyay lala socdo si aanu u dhicin qiima koror ama qiima dhac. (Inflation, deflation ).
Nidaamkan waxa kale oo loo adeegsadaa si loo ilaaliyo isticmaalka lacagta. Haddii isticmaalkeedu yaraado oo dalka gudihiisa wax lagu kala iibsan waayo, waxa yaraana baahida loo qabo lacagtaasi taasi oo keenaysa in qiimaha bangigu u gooyaya uu is bedelo ama sicir barar yimaado.
Baahida lacagta loo qabo ayuu baanka ku ilaalinaya heerkeeda , Nidamka heerka sarifka sugan (A fixed exchange rate) dawladda aya go’aaminaysa qiimaha ay lacagta lagu salaynaya iyadoo u eegayso dahab, silver ama lacag kale. Waana bangiga dhexe ee dalka kan leh masuuliydda qiima goynta lacagta dalka iyo inuu ku ilaaliyo qiimaha uu u gooyay. Bangiga dhexe wax kale oo uu daboolaa lacagaha qalaad ee looga baahan yahay dalka markay taasi fuliyaan.
Haddii shirkado ama dad kale oo ganacsato ahi ay samaystaan nidaam lacageed aan Baanka dhexe ee dalku saamayn iyo maamul ku lahayn waxay noqonayaan lacagahaasi haday noodh ama electronig ama nooc kaleba mid faalso ah oo bulshada waxyeelo ma aan waxtar u lahayn mar haddii aanay dawlada iyo Baankeeda dhexe maamulkeeda lahayn.
Waxaa Qoray / Wariye C.risaaq Xasan Cabdi ( Jubba ).